I-Ivorian idala iYswara, uhlobo lwetiye lase-Afrika eli-100% le-Afrikhepri Fondation
NgoMgqibelo, Septhemba 25, 2021
SU-waady Martin-Leke, owayengumqondisi weGeneral Electric eningizimu yeSahara, wethula umkhiqizo wakhe wetiye kanokusho, uYswara. Isitolo sokuqala sivulwa ngo-Agasti 6 eGoli. Eminyakeni engama-35 kuphela ubudala, uSwaady Martin-Leke akazange azulazule. Ujoyine uGeneral Electric njengomcwaningi mabhuku ngo-2001, uFranco-Ivorian waba ngumqondisi wayo e-Afrika eseNingizimu yeSahara ngo-2009, esebenza eParis naseNairobi, ngaphambi kokuzinza eGoli. Ngaphansi kobuholi bakhe, imali engenayo yase-Afrika yomdondoshiya waseMelika yenyuka isuka kwizigidi ezingama-20 yaya ezigidini ezingama-300 (cishe ama-euro ayizigidi ezingama-250) ngonyaka.
“Ngazalelwa eCôte d'Ivoire, ngakhulela khona naseLiberia ngaphambi kokuba ngiye ekudingisweni. Kodwa bengilokhu ngifuna ukubuya ngizokwakha inkampani ezoqhakambisa ulwazi lwendawo, ”kusho lowo owayegqame kwaGeneral Electric ngokugqugquzela kwakhe izimakethe ezingaphansi kweSahara kanye nabaphathi base-Afrika nabesifazane Amazwe amaningi.
“Umbono wokubandakanyeka ekwenziweni nasekusatshalalisweni kwezikhwama zetiye weza ngesikhathi ngifunda iMBA. Bengifunda ukuthi izinhlobo ezinkulu zikanokusho zaseFrance ezinjengoLouis Vuitton zazi kanjani ukulondoloza nokwenza izimboni imikhiqizo yazo yamasiko. Ngiqale ukufuna i-niche lapho kungenzeka khona ukugcina inani elengeziwe e-Afrika.
Umuntu othanda itiye omkhulu, ngokwemvelo ngacabanga ngale ndawo yonke, ”kuchaza yena. "Ngifunde isu lamaqembu afana nenkampani yaseFrance iMariage Frères, ngigxile ezinhlobonhlobo zetiye ezibizwa ngamagourmet, ezingekho ezitolo ezwenikazi, futhi ngabona ingxenye ekhulayo", uyaqhubeka, eqiniseka ngokwanda kwenani labacebile Amakhasimende ase-Afrika adonswe yilo mkhiqizo kanokusho, wasendaweni nowe-margin ephezulu (ama-60% entengo esikhwameni ngasinye).
Ngemuva kokuthola abakhiqizi abasezingeni eliphakeme baseRwanda nabaseMalawi, umsunguli weYswara uthole umlingani wezimboni ophumelelayo eNingizimu Afrika. Eminyakeni emihlanu, ithemba ukuthi izofinyelela inzuzo engena minyaka yonke yezigidi ezingama-4 kuye kwezi-6,5 zama-euro.
Ubungqayizivele bukaYswara akuyona nje isithombe sakhe sokunethezeka. Ngaphandle kokuthi yonke imikhiqizo eyimfashini i-Yswara yi-100% yase-Afrika, ibuye ibonise ngamagama awo izifunda eziningana ezihlukene kanye nezindaba zazo. Ngakho-ke amaqoqo ahlukene wetiye athatha izici ezihlukene zomasiko nomlando.
Isibonelo, iqoqo elithi "Umbuso Wase-Afrika" ligcizelela ama-monarchies asendaweni yangaphambi kwekoloniyali. Iqoqo "African Queens" (amakhosikazi ase-Afrika) ihlobanisa indlovukazi yase-Afrika nohlobo ngalunye lwetiye. Yiyo kanye ingqikithi ye-Afrika esatshalaliswa ngemikhiqizo yeYswara. Amakhandlela alo ngalinye anamagama ezinhloko-dolobha zase-Afrika, ngakho-ke ukusuka eDakar kuya eNairobi ngeHarare, iSwaady inethemba lokufaka abathengi bayo enhliziyweni ye-Afrika ngesikhathi setiyi ngoba "Wonke amakhandlela ahlaba njengomuzi wase-Afrika".
U-Yaya Angelika, isitshalo sowesifazane
UYaa Asantewa, iNdlovukazi Umama Wombuso wase-Asante
I-Qelasy, ithebhulethi yemfundo eyenziwe e-Ivory Coast
IVangeli Eliyimfihlakalo LikaBarnaba, Ngabe IBhayibheli Akulungile - I-Documentary (2015)
Ukuphila okusebenzayo nokuqwasha